7 Sababood oo Foomamka Lead u u dhintaan | Martech Zone
Dukaanleyda dijitaalka ah iyo dukaamada lebenka iyo hoobiyaha ayaa had iyo jeer ugaarsi ugu jira habab cusub oo cusub oo lagu soo qabto hagitaanno badan oo loogu beddelo macaamiisha lacagta bixisa. In la yiraahdo tani waa caqabad weyn waxay noqoneysaa qirasho xad dhaaf ah, maadaama imaatinka internet-ka uu ka dhigay tartan adag midkasta oo ganacsi la maleyn karo.
Sannadaha oo dhan, tafaariiqda ayaa ku dhejin doona foomamka "Nala Xiriir" websaydhkooda iyagoo rajaynaya in daalacayaasha xiisaha lihi ay iyaga la xidhiidhi doonaan. Foomamadan "Nala Soo Xiriir" waa waxa annaga suuqleyda dijitaalka ahi ugu yeeraan "Foomamka Rasaasta Hogaamiya"; iyo inta ay ujeedo ka shaqeynayeen qiyaastii 10-15 sano ka hor, uguma wanaagsana sidii ay ahaan jireen. Xaqiiqdii, waxaan u gudbi lahaa inta aan dhahayo si quruxsan ayey u dhinteen.
Sidii aan ku soo sheegay maqaaladihii hore, warbaahinta is-dhexgalka waxay noqoneysaa mid caan ka ah tafaariiqleyda (labadaba dhijitaal iyo leben & madaafiic), waxayna si dhaqso leh u beddeleysaa baahida loo qabo foomamka leedhka. Weli, waxaad isweydiin kartaa "Haddii dukaamada ay wali isticmaalayaan foomamka macdanta" lead ", maxaad ugu malaynaysaa inay dhinteen?"
Waa kuwan 7 Sababood oo Foomamka Lead u u dhintaan:
1. Qofna Ma Doonayo Inuu Buuxiyo Foomamka Ma guurtada Ah Haddii Kale
Dhowrkii sano ee la soo dhaafay, foomamka hoggaanka ma guurtada ahi waxay noqdeen wax aan qurxin ahayn. Cidina dhab ahaan dheg uma dhigin foomamka hoggaanka mar dambe; iyo si saraaxad leh, macaamiishaasi wax qiimo ah kuma helayaan gudbinta macluumaadkooda. Ka dib markay soo gudbiyaan macluumaadkooda xiriirkooda, waxay u eg tahay inay god madow galayso rep illaa iyo inta wakiilka iibku u yeerayo iyaga, dabcan.
Ka dib markay macaamiishu soo gudbiyaan macluumaadka xiriirkooda, rajadu waxay tahay in qof ka socda shirkadda uu kula soo xiriiri doono macluumaadka iyo ilaha ay raadinayaan. Hadda, haddii aan wax u bartay sida dukaameysiga joogtada ah ee internetka, ujeeddada dhabta ah ee foomamkan ayaa ah in la helo macluumaadka xiriirkooda oo aan wax ka iibiyo. Mararka qaarkood hoggaamiyeyaasha ayaa la kobciyaa, mararka qaarkoodna ma aha. Si kastaba ha noqotee, inta badan macaamiisha si ikhtiyaari ah u buuxiya foomka hoggaanka waxay u badan tahay inay weli ku jiraan dusha sare ee qashin iibsiga (ama marxaladda cilmi baarista) - taasoo la micno ah inaysan weli diyaar u ahayn inay wax iibsadaan.
Waxaa ahaa dhibic waqtiga ah markii la buuxiyo foomka hoggaanka ma guurtada ah waxay ahayd uun wax ay macaamiishu sameeyeen si ay u helaan macluumaad dheeri ah. Si kastaba ha noqotee, markii uu soo ifbaxay internetka, macaamiisha waxay noqdeen kuwa ka doorbida wax soo saarka iyo adeegyada ay maalgashadaan - waana sida saxda ah! Waxaa jira ikhtiyaarro badan oo aad u badan oo macaamiisha ay ka dooran karaan, sidaa darteed waxay qaadanayaan waqti ay ku sameeyaan cilmi baaristaas. Haddii ay weli raadinayaan macluumaad dheeri ah, waxay u badan tahay inaysan rabin in isla markiiba laga iibiyo.
Khibradaha isdhexgalka (ama foomamka hogaaminta isdhexgalka) ayaa si dhakhso leh u dhaafey foomamka leedhka ee ma guurtada ah sida habka la doorbido ee qabashada macdanta ka dhexaysa ganacsiyada internetka. Sababta tan ayaa ah maxaa yeelay waxay u oggolaaneysaa macaamiisha inay wadahadal wadaag ah oo 2-dhinac ah ay la yeeshaan websaydhkaaga si ay u helaan jawaabaha ay raadinayaan.
Aynu nidhaahno, tusaale ahaan, macaamilku wuxuu rabaa inuu ogaado waxa ikhtiyaarrada maalgelinta ugu habboon xaaladdooda kahor iibsiga alaabta guriga. Tusaale wanaagsan oo waayo-aragnimo is-dhexgal qiimo leh ayaa noqon doonta qiimeyn lagu qiimeeyo macaamilka shaqsi ahaaneed (iyada oo ku saleysan macluumaadka gaarka ah ee ay bixiyaan) waxayna siisaa xal macquul ah. Tani, dabcan, waxay noo horseedaysaa qodobkeena xiga next.
2. Khibradaha Is-dhexgalka waxay soo saaraan Sicirro Wada-hadal Sare
Si ka duwan foomamka hoggaanka ma guurtada ah, waayo-aragnimada is-dhexgalka ayaa macno ahaan u oggolaanaya macaamiisha inay wadahadal la yeeshaan websaydhkaaga. Halkii laga buuxin lahaa "meelaha banaan" (Magaca, emaylka, taleefanka, faallooyinka), wadahadalku wuxuu ku yimaadaa su'aalo iyo jawaabo taxane ah. Sababtaas awgeed, heerarka kaqeybgalka websaydhka ayaa inta badan aad uga sarreeya kan bogagga leh foomamka leedhka ma guurtada ah.
Mid ka mid ah noocyada waayo-aragnimada is-dhexgal ee ugu caansan waa qiimeyn. Khibrada qiimeynta, magacyadu waxay macaamiisha weydiiyaan su'aalo kala duwan si ay uga gaaraan gabagabada iyaga kuna siiyaan xalka suurtagalka ah ee dhibaatadooda hadda. Aynu nidhaahno, tusaale ahaan, macaamilku wuxuu booqdaa degelka websaydhkiisa wuxuuna isku dayayaa inuu ogaado qorshaha dabaqa ah ee ay raacayaan (oo ay jiraan waxyaabo badan oo laga kala xusho). Waxaa soo baxday in tani ay dhibaato caadi ah ku tahay dad badan oo kireystayaal ah. Qaab wanaagsan oo loo xaliyo arintan loona xoojiyo kalsoonida macaamiisha ayaa ah in la abuuro qiimeyn bixinaysa soo jeedinta qorshaha sagxadda. Khibrad ahaan, websaydhku wuxuu ku weydiin doonaa su'aalo xulashooyin kala duwan oo habboon (Ex: "Immisa qof ayaa ka tirsan qoyskaaga? Ma leedahay carruur? Ma haysataa xayawaanno waaweyn oo xayawaan ah, iwm.") Jawaabaha uu bixiyo macmiilkuna waxay bixin doonaan gabagab .
Hadda, ma fahantay waxa aan ula jeedo marka aan idhaahdo “macaamiisha ayaa kula sheekaysan kara websaydhkaaga?” Websaydhku wuxuu ku weydiiyaa su'aalo macaamiilkuna wuxuu ku jawaabaa jawaabaha su'aalahaas. Sababtoo ah wada-hadallada ayaa sida caadiga ah wax yar ka qaata marka si fudud loo buuxiyo foom, taas macnaheedu waa ka-qaybgalka websaydhkaaga ayaa sidoo kale aad u dheer. Intaa waxaa sii dheer, ka dib marka macaamilka la siiyo xalka suurtagalka ah (aan dhahno, sharraxaad darteed, waa 2-qol jiif ah, 1.5 qorshe dabaqa musqusha ah), fursadaha way wanaagsan yihiin in macaamilku rabo inuu ku sii jiro websaydhkaaga oo uu sameeyo cilmi-baaris yar oo dheeraad ah oo ku saabsan xalkaas (ama qorshaha dhulka, halkii). Foomamka macdanta "lead" ma bixiyaan xal degdeg ah; hadaba maxay tahay sababta dhabta ah ee macaamilku ugu qasban yahay inuu ku sii jiro websaydhkaaga illaa ay ugu yeeraan wakiilka iibka? Tani waa sababta ka qaybqaadashadu ay inta badan uga hooseyso degellada leh foomamka leedhka ma guurtada ah.
3. Ka-qaybgalka Sare Waxaa Imaanaya Is-beddelo Sare
Sidii aan horayba u soo sheegay, dadka waaweyni si fudud uma xiiseynayaan buuxinta foomamka hoggaanka ma guurtada ah. Mar labaad, macluumaadkoodu wuxuu galayaa wax aan jirin oo aan la garanaynin (illaa ay ka xumaadaan iibiyaha, taas oo inta badan dhacda) isla markaana isla markiiba ma helayaan wax qiimo leh ka dib markay gudbiyaan macluumaadkooda xiriirka. Siyaabo badan, macaamiisha waxay u dareemaan sidii loo khiyaaneeyey. Waxaa loo ballan qaaday wax qiimo leh, laakiin had iyo jeer ma helayaan. Tani waa sababta macaamiisha aysan u buuxinaynin foomamka hogaaminta joogtada ah.
Mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee ay khibradaha is-dhexgalka u shaqeynayaan ay u guuleystaan ​​ayaa ah sababta oo ah waxay u oggolaaneysaa noocyada inay asal ahaan sameeyaan ballamo ay qaadi karaan! Halkii ay ka sugi lahaayeen macluumaad dheeri ah wakiilka iibka, waxay xal ku heli karaan daqiiqado gudahood. Haddii macaamiisha loo dammaanad qaado xalal degdeg ah, iyagu ma aha oo kaliya inay bilaabayaan khibrada; waxay ku socdaan inay dhammaystiraan waayo-aragnimada oo ay uga beddelaan macaamiisha hoggaan buuxa. Macaamiisha ma rabaan inay sugaan qof kale si ay u siiyaan qiimaha ganacsiga baabuurkooda, mana doonayaan inay dib ugula wareegaan qorshe dabaqa qaali ah oo aan loo baahnayn oo ku yaal dhisme dabaq ah. Macaamiisha ayaa doorbidi lahaa ukuntooda hal dambiil marka hore inta aysan xitaa galin marxaladda iibsiga / ijaarka.
Xalka dhibaatada macaamilku waa dhiiragelinta ugu dambeysa ee ay ku dhammaystirayaan khibrad. Waxaan ula jeedaa, hubaal - waaya-aragnimada is-dhexgalka ah inay qaadan karto wax yar (maaddaama macaamiisha ay u baahan yihiin inay ka jawaabaan su'aalaha si ay u helaan natiijooyinkooda), laakiin haddii ay macnaheedu tahay isla markiiba helitaanka wax qiimo leh oo ka caawin doona go'aankooda wax iibsiga, waxay qaadan doonaan waqti dheeri ah. Oo sidaasaannu u caddaynnaa, dhiirrigelintu waxay noqon kartaa wax kasta oo aad rabto inay noqdaan. Waxay noqon kartaa qiimo ganacsi, qiimeyn (ama warbixin), kuuboon ama qiimo dhimis, buug elektaroonig ah - wax alla wixii qalbigaagu doonayo.
4. Waaya-aragnimada Is-dhexgalku Si Weyn Looga Shaqeyn Karo
Macna ma laha cidda booqaneysa websaydhkaaga, foomamka hoggaaminta ma guurtada ahi waxay si joogto ah u eegi doonaan oo u shaqeyn doonaan si isku mid ah. Waxaa jira meel lagu buuxiyo magacaaga, lambarka taleefankaaga, cinwaanka e-maylkaaga, mararka qaarkoodna waxaa jira boos su'aalo ama faallo ah. Taasi asal ahaan waa xaddiga buuxa ee foomamka hoggaanka ma guurtada ah. Mararka qaarkood waad badali kartaa su'aasha, mararka qaarkoodna ma awoodid. Si kastaba ha noqotee, ugu horreyntii waa markab lagu qabsado macluumaadka xiriirka - iyo wax intaas dhaafsiisan.
Khibradaha is-dhexgalka, si kastaba ha noqotee, waxay leeyihiin fursado aan dhammaad lahayn oo loogu talagalay u-qaabeynta. Khibradaha is-dhexgalku kaliya maahan ujeedooyinkaaga ganacsi, laakiin waxay daboolayaan baahida macaamiishaada sidoo kale. Shuruudda keliya ee waaya-aragnimada aad abuureysaa waa inaad u ballan-qaaddo wax qiimo leh. Waxay noqon kartaa qiimeyn, qiimo dhimis, qiimo ganacsi, gelitaan qarash ah - wax kasta oo soo jiidan kara saldhigga macaamiishaada si aad ugu hesho inay dhameystiraan khibrad.
Ka sokow awood u lahaanshaha nooca khibrada dhabta ah (iyo u habeyn su'aalaha), waxa kale ee qabow ayaa ah in astaantaadu ay leedahay awood buuxda oo ku saabsan muuqaalka khibrad is-dhexgal ah. Wax kasta oo ka yimaada nidaamka midabka, illaa sawirka, iyo ka sii muhiimsan, sumadda, ayaa gabi ahaanba ku xiran go'aanka abuuraha. Waa maxay dariiqa ka wanaagsan ee loo sharciyeeyo astaantaada marka loo eego inaad ku lifaaqdo foomamkaaga hoggaanka is-dhexgalka ah? Kaliya maahan macaamilku inuu ogaan doono in macluumaadka si toos ah adiga kuusocdo, laakiin astaanta ayaa amaahin doonta fikradda ah inay helayaan waxa ay codsanayaan.
Waxaan u maleynayaa barta aan isku dayayo in aan sheego ay tahay in dhammaan noocyada khibradahan ay xiiso leeyihiin. Ma aha qaab cad oo kaliya kuu oggolaanaya inaad geliso qoraalka. Macaamiisha uma sii baahnaan doonaan inay "la hadlaan derbi." Websaydhkaagu wuxuu ka soo ururin karaa macluumaad qaas ah macaamilka wuxuuna soo saari karaa wax qiimo leh oo ku saleysan macluumaadka la soo ururiyey. Foomka hoggaaminta ma guurtada ah ma sameyn karo taas.
5. Way fududdahay inaad ka soocdo naftaada tartamayaashaada
In kasta oo foomamka hoggaanka ma guurtada ahi aanu ahayn hab caan ah oo macaamiisha ay wax kaga weydiiyaan macluumaad dheeri ah, haddana waxaa jira in badan oo shirkado ah oo doorta inay dharbaaxo foomamkan websaydhadooda. Inkasta oo tirada noocyada ka faa'iideysanaya khibradaha is-dhexgalka ay si isdaba-joog ah u sii kordhayaan, astaantaadu waxay u badan tahay inay ka dhex muuqato tartamayaasheeda. Sababta Hagaag, aan sheegno waxa iska cad - maahan in qof kastaa u adeegsado waxyaabaha ku jira isdhexgalka baahiyahooda qabashada hogaanka. Haddii aad dhigto nooc kasta oo waayo-aragnimo is-dhexgal ah boggaaga, waxay si dhakhso leh ugu muuqaneysaa macaamiishaada. Halkii ay ka buuxin lahaayeen foomka caadiga ee caadiga ah oo ay sugaan jawaab, waxay ka jawaabaan su'aalaha iyo wax qiimo leh. Khibradda kaligeed way ka duwan tahay.
Marka labaad, waa inaanan ilaawin qaabka qaabeynta qaababka hogaaminta isdhexgalka. Ma aha oo kaliya muuqaalka guud ee foomka hogaaminta isdhexgalka ayaa ka soo bixi doona maskaxda qofka, laakiin khibrada dhabta ah (qiimeynta, qiimeynta ganacsiga, su'aalaha, ciyaarta, iwm.) Waa mid la xasuusto waana wax ay dhici karto in tartamayaashaadu aysan aheyn ' sameynaya…. weli.
6. Foomamka Lead Lead-ka ah Ma Qaban Karo Qaddarka Xogta ee Suuqleyda Dijital ahi u Baahan yihiin
Maxay yihiin meelaha ugu caansan ee aad ku aragto foomka hogaanka ma guurtada ah? Magaca, taleefanka, cinwaanka emaylka, nooca baaritaanka (badanaa hoos u dhac) iyo mararka qaarkood aag loogu talagalay faallooyinka iyo weydiimaha. Taasi ma ahan macluumaad badan oo dhan, waa sidaas? Macluumaadka xiriirka macmiilku ma bixinayo wax aragti ah oo ku saabsan waxa macmiilku ka dhigayo mid gaar ah. Ma jiro wax macluumaad ah oo ku saabsan dookhyada wax iibsiga, waqtiga wax iibsiga, danaha macaamiisha - liistadu way sii socotaa. Sababtoo ah ma jiraan wax khaas ah oo ku lug leh foomamka hoggaanka rasmiga ah, ma awoodid inaad weydiiso macaamiisha su'aalo ku saabsan waxyaabaha ay magacaagu doonayo inuu wax badan ka ogaado.
Marka la eego sida loo qaabeyn karo foomamka hogaaminta is dhexgalka, astaantaadu waxay si buuxda gacanta ugu haysaa wax kasta iyo dhammaan su'aalaha la weydiiyo. Hadaad rabto inaad waxbadan kabarato waxa macmiilku xiisaynayo inuu iibsado ama haddii ay xiiseynayaan barashada ikhtiyaariyada maalgelinta, waxa kaliya ee lagaa doonayaa waa inaad weydiiso. Waa muhiim inaad weydiiso su'aalahan gaarka ah macaamiishaada maxaa yeelay waxay kaa caawinaysaa adiga (suuq-galiyaha dijitaalka ah) inaad hesho faham wanaagsan oo ku saabsan saldhigga macaamiishaada iyo sida loogu suuq geynayo mustaqbalka.
Marka lagu daro caawinta suuqleyda dijitaalka ah sida naftaada, kooxdaada iibka ah (haddii ay khuseyso) ayaa shaandheyn kara macluumaadka la helay illaa heer shaqsiyeed, dhisida astaamaha macaamiisha isla markaana loo habeyn karo la socoshadooda iyadoo lagu saleynayo macluumaadka gaarka ah ee ku jira astaantooda.
7. Macaamiisha Waxay Hayaan Macluumaad Dheeraad ah
Iyada oo ay weheliso awood u lahaanshaha weydiinta su'aalaha gaarka ah, khibradaha isdhexgalka ayaa sidoo kale siiya magacyada fursad ay ku wargeliyaan kuna sii hayaan maskaxda. Ka dib marka macaamilku dhammeeyo khibrad is-dhexgal ah oo ku saabsan websaydhkaaga (oo uu ku helo dhiirrigelintooda qaab qiimeyn, qiimeyn, qiimo dhimis, iwm), sumaddaadu waxay bixin kartaa macluumaad qiimo badan - laga yaabee sida runta looga faa'iideysto dhiirrigelinta ay ahaayeen la siiyay. Aynu nidhaahno, tusaale ahaan, waxaad tahay macmiil booqanaya websaydhka iibka. Waxaad dhameystireysaa qiimeynta ganacsiga ka dibna waxaa lagu siinayaa qiimaha ganacsigaaga.
Haddaba, haddaa waa maxay? Hagaag, iibiyahaasi wuxuu bixin karaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan waxa ay sameyn karaan si loo hubiyo kuwaas qabsatay baabuurta iyagoo ka helaya qiimaha ugu badan ganacsigooda. Waxay noqon kartaa qaab ikhtiyaarro khibrad is-dhexgal dheeraad ah. Hal khibrad ayaa noqon karta qiimeynta haddii ay tahay inay iibsadaan "mid la isticmaalay ama mid cusub," mid kalena waxay noqon kartaa helitaanka ikhtiyaarada maalgelinta ugu fiican. Wax kastoo khibrad loo doorto, macluumaadkaas dheeriga ah wuxuu macaamiisha u oggolaanayaa inay si dhab ah uga fekeraan go'aan kasta oo ay ku gaarayaan magacaaga. Sidoo kale, aynu si buuxda u noqono daacad - inta maskaxdoodu sarreyso ee ay yihiin iyo inta badan ee ay astaantaadu taagan tahay, ayay u badan tahay in macaamilku si fudud u xasuusto astaantaada.
Tags: waxyaabaha la wadaagayosuuq geyntawarbaahinta is-dhexgalkafoomamka leedhkafoomamka rasaasta ayaa dhintayqalabka suuq-geyntaPERQCTAs smart
Waxaan gabi ahaanba aragnay tan. Foomamka istiraatiijiga ah waxay isu beddeleen dabinno spam ah halka qiimeynta iyo isdhexgalka, bogagga soo jiidashada leh ay horseed u yihiin hoggaanno wanaagsan iyo beddelaad Maqaal Cajiib ah!
Jan 30, 2017 saacadu markay ahayd 2:04 PM
Miyaad haysaa tusaalooyin fiican oo tan ah? Waxaan u maleynayaa in qodobka si fiican loo sheegay oo culeys saarayo. Si kastaba ha noqotee, inaad ka tagto faallo, waa inaad buuxisaa 3 foom. #xikmad 🙂
Jan 30, 2017 saacadu markay ahayd 2:09 PM
Ugufiican. Faallo. Weligaa.
Maqaal macluumaad ah! Aad baa loo qiimeeyay. Laakiin fadlan u isticmaal taxaddar markaad bixinayso tusaalooyinka. Bulsho dabaq ah oo weydiineysa "Carruur ma leedahay?" waxay jebineysaa Sharciga Guriyeynta Cadaaladda ee Federaalka. Xaaladda qoysku waxay noqotay fasal la ilaaliyo 1988. Aad ayaad u mahadsantahay!
Qodob weyn - waad ku mahadsan tahay kor u qaadista wacyiga taas!